ယောဂီလေလား … ဝိညာဉ်လား… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ယောဂီလေလား … ဝိညာဉ်လား…
ယောဂီလေလား … ဝိညာဉ်လား…
Posted by နွယ်ပင် on Jun 16, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.., Short Story | 22 comments
အခုတစ်လော ရွာထဲမှာ သရဲအကြောင်းတော်တော်ပြောနေကြတာနဲ့ နွယ်ပင်လဲပြောချင်လာတယ် ရွာသူ/ ရွာသားတွေကတော့ သရဲဆိုတာတကယ်ရှိမရှိတော့မသိဘူး
နွယ်ပင်ကတော့ သရဲလိုပြောရမလား ဝိညာဉ်လို့ပဲပြောရမလား မကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့သူလို့ပဲပြောရမလား ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့တာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ် ..
သင်္ကြန်တွင်း တစ်နှစ်ပေါ့ နွယ်ပင်တို့ အလုပ်အတူလုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး တရားစခန်းဖြစ်ဖြစ် သီလရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဝတ်မယ်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ကြတယ် အဲဒီမှာ
သံလျှင်မှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူတို့ဘက်မှ တရားစခန်းရော သီလ၇ှင်ရောပါဝတ်လို့ရတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိတယ် တောကျောင်းမို့လို့အေးချမ်းတယ်
တစ်ခြား ဘာမှ အပူအပင်မရှိဘူးပြောလို့ သွားဝတ်ဖြစ်ခဲ့တယ် သီလ၇ှင် (3) ပါးနဲ့ ယောဂီ (4) ယောက်ပေါ့ ကျောင်းလဲရောက်ရော သူငယ်ချင်းပြောသလို တကယ်အေးချမ်းပြီး တရားဝင်တဲ့သူတွေကလဲ ကိုယ့်ကျောင်းလေးနဲ့ကိုယ် နောက် အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ အိမ်ခြေကမရှိ ကျောင်းရဲ့ အနောက်ကလဲ တောလို့ပြောလို့ရတဲ့ သစ်ပင်တွေချည်းစုဝေးနေတဲ့ နေရာ တိတ်ဆိတ်ပြီး တကယ့်ကိုပဲ တရားကောင်းကောင်းအားထုတ်လို့ ၇မယ့်နေရမျိုးပါပဲ .. တစ်ခုပဲ ပြောစရာရှိတယ် အိမ်သာက ကျောင်းနဲ့ တော်တော်လေးဝေးတော့ ညရေးညတာဆို သွားရင် မြွေပါးကင်းပါးတော့ စိတ်ပူစရာရှိတာပေါ့ …
နွယ်ပင်တို့ နေရမယ့်အဆောင်က သွားတဲ့ လူ (7)ယောက်နဲ့ ဆို ကျယ်တောင်နေသေးတယ် အခန်းလဲ (2) ခန်းပါတော့ သီလရှင် (3)ပါးက ခေါင်းရင်းခန်းမှာနေ ယောဂီတွေကတော့ ခြေရင်းမှာနေဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာကိုယ်ခွဲ လိုက်ကြတာပေါ့ နွယ်ပင်တို့နေတဲ့ ခေါင်းရင်းခန်းမှာ ယောဂီဝတ် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံကိုချိတ်ထားတော့တွေ့တော့ ဒီကျောင်း၇ဲ့ အလှူ၇ှင်လား ဆိုပြီး စပ်စပ်စုစုသွားမေးမိတယ် အဲတော့ ဆရာလေးတစ်ပါးက “မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ အမြဲဝင်နေကျယောဂီပါ ဆုံးသွားပါပြီ စိတ်ထဲ မထားပါနဲ့တဲ့ ” အဲမှာ စတာပဲ ကိုယ်က ဒီအတိုင်းသိချင်ယုံ စပ်စုပြီးမေးလိုက်တာကို ဆရာလေးက စိတ်ထဲမထားပါနဲ့ ပြောတာဘာလို့ပါလိမ့် ဆိုပြီး ပုံကိုသေချာကြိးကိုသွားကြည့်မိတော့ မျက်လုံးက အ၇မ်းအသက်ပါပြီးကိုယ့်ကို ပြန်ကြည့်နေသလိုခံစားရတယ် အဲတာနဲ့ တစ်ခြားသူတွေကိုလဲ ပြောတော့ သူတို့လဲ အဲလိုပဲ ခံစားရတယ်တဲ့ အဲ့မှာ ဇာတ်လမ်းက စတာပဲ
သွားတဲ့ သူတွေကလဲ သတ္တိကခပ်ရှိရှိဆိုတော့ အဲ့ပုံကိုမကြည့်ရဲတောဘူ့း ပုံရှေ့ရောက်ရင် ခေါင်းကိုငုံ့ပြီး သုတ်ခြေတင်တော့တာပဲ .. ညလဲရောက်ရော တောကျောင်းဆိုတဲ့ အတိုင်း မီးကလဲခပ်မှိန်မှိန် အခန်းထဲက ဓာတ်ပုံကြီးကလဲ အသက်ဝင်ဝင်နဲ့ စိတ်ကလဲဟိုတွေးဒီတွေးပေါ့ အဲ့အချိန်မှာ နရံပေါ်က ဘုရားရုပ်ပုံကားချပ်ကြီးက လေမတိုက်ဘာမတိုက်နဲ့ စပြီးတော့လှုပ်လာပါရော ကိုယ်တွေကလဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ကြည့်နေတာပေါ့ ပြီးလဲပြီးရော …..အသံအကျယ်ကြီးနဲ့ တောက်တဲ့ တောက်တဲ့ ဆိုပြီးအော်လိုက်တာ လူတွေကို တုန်တက်သွားတာပဲ အဲ့အချိန်မှာပဲ ခြေရင်းအခန်းက ယောဂီအငယ်လေးက သူမအိပ်ရဲတော့ဘူး ဆရာလေးတို့နဲ့ လာအိပ်မယ်ဆိုပြီးေ၇ာက်လာပါရော နွယ်ပင်တို့ကလဲ ဟင့်အင်း လို့မငြင်းဘူး လူများတော့ ပို အား၇ှိတယ်ဆိုပြီးခေါ်အိပ်တာပေါ့ ညရောက်တော့ ယောဂီကလေးက ဇာတ်လမ်းစတော့တာပဲ အိမ်သာသွားချင်တယ်လိုက်ပို့ပေးပါတဲ့ အဲတော့ ကိုယ်ကပဲ မကြောက်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီးလိုက်ပို့ပေးရတာပေါ့ အိမ်သာလဲရောက်ေ၇ာ သူက ခဏလေးနော်ဆရာလေးဆိုပြီး ဝင်သွားတာ (15) မိနစ်လောက်ကြာမယ် အပြင်မှာရပ်နေတဲ့ ကိုယ်ကသာ ညဘက်မှောင်မှောင်မှာ မြွေလဲကြောက် ကင်းလဲကြောက် ဟိုဟာကြောက် ဒီဟာကြောက်နဲ့ သစ်ပင်ပေါ်ကပဲ လက်ယပ်ခေါ်နေသလိုလို ဟိုဘက်နားကပဲ လှမ်းခေါ်နေသလိုလိုနဲ့ ယောဂီလေးက သူ့ကိစ္စလဲပြီးရော :ဆရာလေးတဲ့ စောစောက ဘာသံမှမကြားဘူးလား မီးမှာကြောက်လိုက်တာတဲ့ အပြင်က နေကုတ်ခြစ်နေတာလေတဲ့ “
‘ဒီလိုနဲ့ အဆောင်လဲပြန်ေ၇ာက်ရောကဲ အိပ်ကြမယ်ပေါ့ မနက်ဖြန်မနက်စောစော တရားလဲ ထိုင်ရမှာဆိုတော့ဆိုပြီး အိပ်ကြတယ် ကျောင်းမှာက တစ်နာရီထိုးပြီးတိုင်း သံချောင်းခေါက်တယ် နွယ်ပင်က အိပ်ယာပြောင်းရင်မအိပ်တက်တဲ့ သူတွေ၇ဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုလူးဒီလူးနဲ့ နာရီသံချောင်းခေါက်သံလေးတွေကို နားစွင့်နေမိတယ် နံရံက တောက်တဲ့ကလဲ3မိနစ်တစ်ခါမှန်မှန်အော်နေလေရဲ့ ည (12) နာရီထိုးပြီးလို့ ခဏလေးလဲနေရော ခွေးအူသံတွေကို စပြီးကြားရတော့တာပဲ ခွေးတွေကလဲ အူ တောကောင်တွေ (ငှက်လို အကောင်တွေထင်တယ် ) သူတို့တွေကလဲအော်ဆိုတော့ စိတ်ထဲ့နည်းနည်းတော့ လန့်လာတယ် နိုးနေတာကလဲ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ထင်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့ အဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်လက်ကို တစ်ယောက်ယောက်က လှမ်းထိသလိုလို ကုတ်နေသလိုလိုလဲ နောက် ………အသံတိုးတိုးလေးနဲ့လှမ်းခေါ်နေသလို
ဒိအချိန်လေးတွင်းမှာ ခံစားလိုက်ရတဲ့ ခံစားချက်လေးကတော်တော်ဆိုးတယ် ကြည့်လဲ့ကြည့်ချင် မကြည့်လဲ မကြည့်၇ဲဆိုတော့ အားတင်းပြီးလှမ်းလဲကြည့်လိုက်ရော…….
ကိုယ့်လိုပဲ မအိပ်သေးတဲ့ယောဂီလေး အဲတော့မှ “ဟင်း” ဆိုပြီးသက်ပြင်းခနိုင်တော့တယ် ပြီးမှ ဘာလဲဆိုပြီးမေးငေါ့ပြလိုက်တော့ သူပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းက
“ဆရာလေးခြင်ထောင်ခြေရင်းမှာ လမ်းလျှောက်နေတယ် ယောဂီတစ်ပါးတဲ့ ” ကြည့်လဲကြည့်လိုက်ရော
တကယ် အဟုတ်ကိုပဲ ခြေရင်းမှာ လမ်းလျှောက်နေတယ် ယောဂီတစ်ပါး မီးကလဲ မှိန်ပြပြနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်သူမှန်းမသိဘူး အဲတာနဲ ခေါင်းထောင်ပြီးကြည့်လိုက်တော့
ဒူးအထက်ပိုင်းမပါတဲ့ ယောဂီတစ်ပါး လမ်းလျှောက်နေတာတွေ့တော့ မနက်ကမှ တုန်းထားတဲခေါင်းကဆံပင်လေးတွေတောင် ထောင်တက်သွားတယ် တစ်ခါတည်းခေါင်းမူးခြုံပြီးအိပ်လိုက်တာ မနက် (4) နာ၇ီဘယ်လိုထိုးသွားမှန်းကိုမသိဘူး …
ဒိအဖြစ်အပျက်လေးက တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ တရားစခန်းဝင်တဲ့ (၇) ရက်မှာ ခြေရင်းက ယောဂီကလဲ ညတိုင်းသူထုံးစံမပျက် နွယ်ပင်တို့ခြေရင်းမှာ လမ်းလျှောက်ပြီး နေခဲ့သလို ကိုယ်တွေကလဲ ထုံးစံမပျက်ခေါင်းမူးခြုံအိပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
သူရဲ တစ္တေ ဆိုတာ တကယ်ရှိမရှိတော့ မသိဘူး ။ ဒါမေပဲ ကြောက်တာ တော့ ကြောက်တယ်။ :D
ညလူခြေတိတ်ချိန်မှ.. အေးအေးဆေးဆေး တရားမှတ်..လမ်းလျှောက်ပါတယ်..
..သရဲတွေက… ခေါင်းမူးခြုံပြီး.. ခြောက်ကြတယ်တဲ့..။
ရန်ကုန်..မင်္ဂလာဒုံကနေ.. သီလရှင်သွားဝတ်တဲ့.. တယောက်ကပြန်ပြောပြတာ…။
တိုက်ဆိုင်နေသလား..မသိဘူးနော…။ သူပြောတဲ့အချိန်ကလည်း.. သင်္ကြန်တွင်းပဲ…။
သဂျီးကတော့ပြောတော့မယ် နွယ်ပင်တို့က သံလျှင်ပါ မင်္ဂလာဒုံ မဟုတ်လို့တော်သေးတယ်
မဟုတ်ရင် ကိုယ်တွေကပဲ ခေါင်းမူးခြုံပြီး ပြန်ခြောက်နေသလိုလို …..
မမြင်ရတဲ့ပရလောကသားတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ် … ။ မယုံကြည်ပေမဲ့ လက်ခံရပါတယ်… ။
အောင်ချမ်းသာကနေ ဆိုင်ကယ်စီးပြီးသွားရတာပဲ မှတ်မိတော့တယ် ကျောင်းနံမယ်တော့ မေ့နေပြီ မဝေရေ .. သက်သက်လွတ်ကျောင်း ကမ္မဌာန်းကျောင်းဆိုတာတော့သိတယ် .. နွယ်ပင်က သန်လျင်ဘက်ကို သိပ်မကျွမ်းလို့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး ….
မှော်ဘီက ရိပ်သာ တခုက အဆောင်တခုမှာ ရိပ်သာဝင်တဲ့ လူတွေ သွားခါနီးရင် ဟိုပွ ဒီပွ ဖြစ်နေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ခေါက်ပေးတတ်တယ်။ အဲဒီ အဆောင်ကလည်း မိုးပဲ ရှိတာ (ဇရပ်ပုံစံမျိုး) အကာ မရှိတော့ ယောကျားလေးတွေပဲ ထားတယ် အမျိုးသမီး ဆို အကာအရံ မရှိလို့ မသင့်တော်လို့ မထားဘူး.. ခြံစည်းရိုး ခတ်ထားတာ.. ယောဂီတွေ ထွက်တာနဲ့ အကုန်သော့ခတ် အကာအရံ မရှိတော့ ပစ္စည်းမပျောက်ရအောင် လုံးဝ ပေးမ၀င်ဘူး။ ကွင်းပြောင်ပြောင်မှာ ခြံစည်းရိုးခတ်ထားတာ ဆိုတော့ လူဝင်သွားရင်လည်း သိသာတယ်။ မနက် တုံးခေါက်တဲ့ အချိန် ထွက်သွားကြပြီး ညအဆောင်ပြန်အိပ်တဲ့ အခါ မနက်က ပုဆိုးတွေ အပုံ လိုက်ထားခဲ့လည်း အားလုံး သပ်သပ်ယပ်ယပ် ခေါက်ထားတယ်။ ပစ္စည်း လုံးဝ မပျောက်ဘူး။ နောက်တော့ တီးတိုး အသံနဲ့ စမ်းသပ်တဲ့ အနေနဲ့ အားလုံး ဖွပြီး လူတွေ အားလုံးစစ်ပြီးတော့ သော့ခတ်ပြီး ထားခဲ့လည်း ခေါက်ထားပြီးသားပဲ။ အဲဒီက မှာတောင် နောက်မိသေးတယ် ဒီအဆောင်က သရဲက အိမ်တွင်းမှု နိုင်နိင်းတဲ့ သရဲမ ပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ နောက်နေကြတယ်။ လူကိုတော့ အသံပလံ နဲ့ အနှောက်အယှက် မပေးဘူး။
ဖတ်ရင်း နဲ ကြက်သီးတောင် ထ တယ်၊ တစ်ခါတည်းခေါင်းမူးခြုံပြီး အိပ်တော့မယ်
အခု သရဲလို့ခေါ်တဲ့ အရာအများစုဟာ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှု့တွေကြောင့် ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်တာပါ။
အနည်းစုကတော့ သက်ရှိသတ္တ၀ါတမျိုးဖြစ်တဲ့ ကာမဘုံသား (ခန္ဓာ၅ပါးရှိသော ပဉ္စဝေါကာရသတ္တ၀ါ) ပြိတ္တာတွေပါ။
အရိယာမဖြစ်သေးသူ မည်သူမဆို သေလျှင် ပြိတ္တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပြိတ္တာ ဖြစ်လျှင် သူမသေမီ အာရုံအကျများသော ပျော်ပိုက်သော နေရာများမှာ အများဆုံး သွားလာကျက်စား ပါတယ်။
ယောဂီသေလို့ ပြိတ္တာဖြစ်လျှင်တော့ သူအပျော်ပိုက်ဆုံးနေရာဟာ တရားကျောင်း တရားစခန်း နဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဘုရားစေတီများပဲ ဖြစ်ဘို့များပါတယ်။
ခေါ်ခေါ်ပြီး အမျှဝေနေကျနေရာတွေဟာ နေရာရှင်က ခွင့်ပြုပြီးသားမို့ ကျောင်းစောင့်နတ် စသည့် ဘုန်းတန်ခိုးပိုကြီးသူများကလဲ အဲဒီပြတ္တာများကို တားမြစ်မည်မဟုတ်ပါ။
တရားစခန်းများဟာ သရဲအကြောင်း အများဆုံးကြားရတဲ့ နေရာများပါပဲ။
ယခုကွန်မင့်ကို ဆရာသမားများထံမှ သိရသည့်အတိုင်း ဖေါက်သည်ချတာမို့ (ထင်ပါသည်../ဖြစ်နိုင်ပါသည်..) စတဲ့ အသုံးအနှုံးများ မသုံးပဲရေးပါတယ်။
ရွာထဲကလူတွေ တစ္တေအကြောင်းဆို တယ်အရေးကောင်းသကိုး
ခုလဲအရေးကောင်းတော့ ဖတ်ရင်းနဲ့တောင်ကြောက်တယ်။ ကျနော်ကတော့ သရဲရယ်လို့မဟုတ်ဘူး မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ယုံတယ်။
BUDDHA တရားတော်မှာတော့ ဝိညာဉ် (လိပ်ပြာကောင်)မရှိပါ။သေပြီးသွားရင်အကြောင်းအကျိူးဆက်အရ ဘုံတစ်တစ်ဘုံမှာဖြစ်ပေါ် မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘ၀က်ိုစွဲပြီး ပြိတ္တာဖြစ်တာရမှာပါ။အရင်ဘ၀က ရုပ် ပဲမြင်ရတာကတော့အတ္တအားကြီးလို့နေပါလိမ့််မယ်။
အသိတစ်ယောက်လည်း ကြုံဖူးတယ်။ X Men ပြောသလိုပဲ သူတို့တွေက ခွင့်ပြုထားရင် လာနေလို့ရတယ်ထင် တယ်။ အသိတစ်ယောက်ကြုံတာကတော့ သူက သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တော်စပ်ဖူး ပြီး ဆုံးသွားတဲ့လူတွေကို တရားပြီးရင်အမျှဝေချင်လို့ တောစောင့်၊မြို့စောင့် စသဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ခွင့်တောင်းပြီးဖိတ်ခေါ်ထားတာ တကယ်လာသတဲ့
မန်းတလေးသား တွေ romantic spa လို့ ပြောလိုက်ရင် မရောက်ဖူးရင်တောင် ကြားဖူးကြမှာပါ ။ အဲဒီ မှာ လည်း ခြောက်လန့် တတ်ပါတယ် ။ အမြဲ လို တော့မဟုတ်ဘူး ။ အဲဒီက သန်လျင်သူ အေးခိုင် ဆိုတဲ့ ကလေးမ လေး ဆိုရင် ခဏခဏ ၀င်စီးခံ ရတယ် ။ သူ့ ကို စီးပြီ ပူးပြီ ဆိုရင် ကျန်ကောင်မလေး တွေ က ၀ိုင်းချုပ်ပြီး အခန်းထဲ မှာ ပိတ် ပြီး ပရိတ်ရေ နဲ့ ဝိုင်းပတ်ဖြန်းလိုက်မှ သက်သာ သွားတယ် လို့ သိရပါတယ် ။ အဲဒီကို သွားနေကြ သူ တော်တော်များများ လည်း ကံ ဆိုး ခဲ့မယ်ဆိုရင် မကြာခဏ ခြောက်လန့် ခြင်း ခံရတယ် လို့ သိရပါတယ်
တောက်တဲ့ ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်နော်
သရဲလား ဘာလားတော့ မသိဘူး ပေါ့လေ..
ငယ်ငယ်က တောင်ကြီး ဘက်ကို ခရီးထွက်တာ.. ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တည်းရတယ်။ ဟိုတယ်တွေ သိပ်ခေတ်မစားသေးတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတည်းတဲ့ အဆင့်ပေါ့။
ညဘက် အိမ်သာ ထ သွားတာ အိမ်သာ အလှည့်နဲ့ ၀င်တော့ ကိုယ်ပြီးတော့ သူများ စောင့်ပေါ့..
သူများ စောင့်နေရင်းနဲ့ ဟိုကြည့် ဒီကြည့် ပတ်ဝန်းကျင် တခုလုံး သစ်ပင်ကြီးတွေ နဲ့ ခြုံပဲ ရှိတယ်။
သစ်ပင်ကြီး တွေ ကြားထဲက ကိုရင်လေး ၁ပါး အသည်းအသန် ပြေးလာတာ အနားနီးမှ မြင်တယ် မျက်စိရှေ့က ဖြတ်ပြေးပြီး အိမ်သာ နဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း ခြုံပုတ်ထဲ ပြေးဝင်သွားတယ်။
သရဲ ခြောက်မှန်းတော့ မသိလိုက်ဘူး ကိုရင် ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ မကြောက်လိုက်ဘူး ရုတ်တရက် မြင်လိုက်လို့ လန့်သွားတာပဲ ရှိတယ်။ နောက်မှ တွေးမိတာ အဲဒါ သရဲ ခြောက်တယ် ခေါ်မယ် ထင်တယ်လို့။ ညကြီး အချိန်မတော် သွားလာစရာ အကြောင်း မရှိတဲ့ နေရာကြီးတွေ ဖြစ်နေတာဆိုတော့.. ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး
မေးစေ့ကိုကိုင်၍ CIA အရာရှိစတိုင်ဖြင့်စဉ်းစားခန်းထုတ်သည်
ကျွန်ုပ် CIA အရာရှိ
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု မှ အမှု့သွားအမှု့လာများနှင့်
ဖွားလေး ဆူး တွေ့ရှိသော ထိုကိုရင်လေးဟာ
ဖွားလေး ဆူး အီးပါတာကို လာချောင်းတာဘဲဖြစ်မယ် :D :D :D
အိမ်သာ နဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း ခြုံပုတ် ပါဆိုမှ.. အိမ်သာ အနောက် ၀င်သွားတာမှ မဟုတ်တာပဲ ဟာကို.. ည၁နာရီ လောက် ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ အဲဒီ အချိန် ကလေးများ အိပ်ကောင်းတဲ့ အချိန်ပဲဟာ.. ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဘုန်းကြီး တစ္ဆေ ဆိုတာ ရှိနိင်သလို ကိုရင် သရဲလည်း ရှိချင်ရှိမှာပေါ့။
သရဲတွေ ရှိနေပြီလား မသိ…
ခေါင်းမြီးခြုံသရဲတွေကော.. ဂျိုနဲ့ သရဲတွေကော….
ဟားဟား သဂျီးမင်း ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ။ သရဲတစ္ဆေ တကယ်ရှိတယ်ဗျို့။ များများဆက်ရေးကြပါ…သရဲများလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် သဂျီးကို ဝင်စီးကြပါ။
သမုတိသစ္စာအားဖြင့် ပြိတ္တာလောက အနေနဲ့ တကယ်ရှိပါတယ်။